Kuhlaselwe owomndeni wakwaShembe - Ilanga News
Home Izindaba Kuhlaselwe owomndeni wakwaShembe
Uthi kujikijelwe ibhomu likaphethiloli ngefastela phakathi kobusuku
UHLASELWE ngebhomu likaphethiloli umndeni womholi wakwaShembe oseShowe ovukuze indaba yokuthi umholi wamaNazaretha ohlangothini lwaseKuphakameni, iNkosi Vukile “Ncoyincoyi” Shembe yaqhwakela ngokungemthetho esihlalweni sokuhola lolu hlangothi.
UMnu Bhekizitha Shembe – oyindodana kaMnu Nguye Shembe ongumfowabo omdala kayise weNcoyincoyi (ongasekho), iNkosi Londa “Phasha” Shembe – uhlaselwe emzini athi wawushiyelwa nguyisemkhulu, iNkosi Galilee “iLanga” Shembe, kwesikabhadakazi izolo ngeSonto.
Uthi ungenelwe ngabantu ngo-1:30 babulala ifasitela ekamelweni lakhe lokulala, bajikijela ibhomu likaphethiloli. Ngenhlanhla ngalesi sikhathi ubehleli ekamelweni lokuphumula, engalele, kwasha ikhethini nombhede basheshe bawubona umlilo bawucisha.
Uhlaselwa nje, ubesanda kubhala incwadi evulelekile ephonsela iNkosi yaseKuphakameni inselelo ethi mayikhiphe incwadi yefa ngoba akekho emndenini oke wayibona.
Incwadi yakhe ithi incwadi yefa uPhasha wayishiya kubameli bakwaMooney Ford & Partners, kodwa yathathwa yiNcoyincoyi kulaba bameli ngaphandle kokwazisa umndeni noma ikomiti elashiywa nguPhasha ukuthi kube yilo elizoqondisa zonke izindaba zebandla ngisho nokubekwa kwenkosi ezomelama imbala.
“Mayelana nobuholi bebandla eKuphakameni, into eyenziwa kwamenyezelwa igama lomunye wabantwana bakababa, uLonda Shembe, okunguVukile Shembe, kodwa lokhu akwenziwanga yikomiti, kwenziwa yizinhlalisuthi zakhona ebandleni.
“Kasazi ukuthi ulithathaphi igunya lokuthatha incwadi yefa kubameli ngaphandle kokwazisa umndeni uma kungekho ayekufihla. Manje kule ncwadi kasazi noma kukhona yini okwabalulwa ngubaba ukuthi kuzosalela abantwana nondlunkulu okungaba yizimoto, imfuyo namasimu.
“Sibhale le ncwadi nje hhayi ngoba sinenkinga ngobuholi obukhona njengamanje eKuphakame-ni, sifuna ukubona ukuthi incwadi yefa iveza ukuthi konke kwahamba ngendlela yini. Uma kukhona okungahambanga kahle, kungasijabulisa ukuthi kulungiswe,” kusho uMnu Shembe encwadini.
Uthi akukhona okokuqala ehlaselwa njengoba ethi ngonyaka odlule wake washaywa kanzima ngokuthiwa bangamalungu ohlangothi lwaseKuphakameni bethi makaphume aphele kubo njengoba engasakhonzi nabo.
Uthi uke wadutshulwa kwaze kwaba kabili. Usihlalo weNazirite Judicial Council, uMnu Wellington Myeni, uthi udaba lukaMu Shembe lubuhlungu futhi uke wababhalela incwadi echaza ngokuhlukumezeka kwakhe nokuphucwa ilungelo lokukhonza ngokukhululeka.
“Udaba lwakhe salubika kwiSouth African Council of Churches ngesikhathi sihlangene nosihlalo wayo, yiMotsepe Foundation nezikhulu zebandla lethu lezi ezingazwani noMnu Shembe, siyofuna uxhaso lwemali emsebenzini esiwenzayo wokusiza izingane zamaNazaretha ezihlukunyeziwe.
“Ngeshwa basivala bathi lolu daba kufanele lukhulunywe ebandleni ngaphakathi maqede basi-valela nomnyango bathi imali masinganikwa ngoba umsebenzi esiwe-zayo kawubusiswanga ekubeni iNkosi yaseBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe yasikhipha isibusiso ngokunjalo neNkosi yaseGinyezinye, uSizwe Shembe yasibusisa.
“Okubuhlungu wukuthi uMnu Shembe uhlaselwa nje, uhlala nezingane engabe sizitholela usizo zilulekwe ngokwengqondo kodwa esingakwazi ukukwenza ngoba kasinamali,” kusho uMnu Myeni.
Okhulumela ibandla laseKuphakameni uMnu Thetha Ngiba uthi kayikho into abayibanga noMnu Shembe.
“Thina udaba ebesilubanga naye lokuzenza inkosi yasethempelini ePhindulimi lwaya enkantolo lwamhlula. Inkantolo yathi makakhokhe izindleko zecala okunamanje akakasikhokheli. Besingamhlasela sifunani kuyena?
“Thina singamakholwa, izinto kasizixazululi kanjalo. esingamcebisa ngakho wukuthi asebenzisane namaphoyisa ekutholeni abahlaseli bakhe, hhayi le nto yokubheca amakholwa aseKuphakameni ngento engekho,” kusho uMnu Ngiba.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala lokuzama ukubulala eliphenywa ngamaphoyisa aseShowe.
Previous articleUngqimphothwe ngokuvulwa kwezikole
Next articleIphoyisa lizidubule phambi kozakwabo lisaba ukuboshwa